ILAY FANOMEZANA SAROBIDY
Indray andro hono dia nibedy an’ity zanany ity raim-pianakaviana iray satria nandanindany foana ny papier cadeau, namonosany baoritra iray ary dia napetrany teo am-pototry ny hazo Noely tao an-trano ; ny vola anefa efa tsy misy satria tena fianakaviana sahirana izy.
Ny ampitso anefa, avy ilay tovovavy kely nanatona an-drainy, sady nitondra ilay Cadeau:
- Dada a, atolotro anao ity, noho ny fitiavako anao
Nisava tanteraka ny hatezerany omaly rehefa nadray ny fanomezana, saingy rehefa novahany, tsy nisy na inona na inona tao anatiny, nirongatra indry ny hatezerany.
- Ary toa tsy misy na inona na inona akory ato anatiny? Hoy izy namaha ilay cadeau
- Cadeau feno ba io ry Dada a
- Aiza izay ba eo, sady nasehony ho hitan’ny zanany, tsy nisy na inona na inona tokoa tao anatiny, sady natsipin-drainy ilay baoritra.
- Dada a, tsy ba kiraro anie izany e, oroka be dia be avy aty amiko no namenoako an’io boite io Dada a!
Latsaka ny ranomason-drainy sady novonjena noraisina haingana indray ilay fanomezana, dia nanoroka an-janany sady namihina azy izy.
- Misaotra anaka; fa tena tia ahy ianao, ary mifona aminao aho noho ny amin’ny fihetsika izay nataoko teo, hay tena tia ahy ianao!
Nisy hono fahizay olona fito mirahalahy. Ny enina zokiny dia sady bolangina no tsara tarehy, fa ny farany kosa , I fFaralahy, dia sady keliray no ratsy tarehy. Isan’andro dia esoisoin’ny rahalahiny foana izy, ary rehefa maty ny ray aman-dreniny dia vao mainka loza no nahazo azy fa nampijalian’izy ireo fatratra izy.
Dia tapa-kevitra hono izy hitady an’I Zanahary, Andriamanitry ny Malagasy, ary nandeha nankao amin’ny ray aman-dreny sady olon-kendry iray atao hoe Rafovato. Dia nanontany azy hono Ingaibe izay anton-diany:
- Handeha ho any amin’I Zanahary aho ka inona no tokony hataoko?
- Amin’ny Talata ianao no tsara miainga, hoy Rafovato, ary ho tafita ianao rahamihaino tsar any toro-hevitro.
- Aza matahotra ianao vfa vonona aho hanaraka izay lazainao.
- Rehefa afaka amin’io tendrombohitra lehibe io ianao, dia hahita lohasaha feno fary, an’ny Zanahary io, fa tsy azonao kitihina, fa mizotra amin’ny lalanao ihany ianao; dia hahaita indray ianao ondry matavy sady mandimandina aok’izany, Azi ihany koa ireo, tsy azonao kotabaina ireo. Rehefa mandeha ihany ianao, dia hahaita voasary volatra be, tandremo fatsy mahazo maka ianao, fa an’ny Zanahary ko ireo. Rehefa hiakatra tendrombohitra indray ianao, dia hahita omby matavy be dia be, tandremo an, tsy azonao torahana ireo; na ampitahorina.Rehefa afaka izany, hahita loharano madio mangalahala ianao, an’ny Znahary koa io, tsy azonao hisotroana io; na doia mangetaheta aza ianao. Ary farany, rehefa tonga ao an-tranon’I Zanahary ianao, ka raha tsy ao Izy, dia arahabainao tsara ny vadiny, ary raha manome rano anao izy, dia tsy mahazo mikasika ny zinga ianao n any siny fa ny vavanao ihany no atanatanao, isotroanao ny rano!
Dia nisaotra an-dRafovato i Faralahy ary lasa nandeha.
Rehefa teny an-dalana, dia hitany avokoa ireo zavatra nambaran’i Rafovato. Nahita ny fary vokatra be izy, fa saingy niteny fotsiny izy hoe; “Andray izany hatsaran’izany fary”, Ny lalany ihany anefa no nozoriny. Tojo azy koa avy eo ny ondrin’ny zanahary, fa notandremany tsara ary tsy nikasika na dia iray azan y zavatry ny Zanahary izy.
Rehefa izany, tsy mbola nahita voasary vokatra sady tsara aok’izany izy, fa na dia noana aza izy, tsy sahy nikasika na dia iray akory aza. Nandalo ihany koa izy teo amin’ny ombin’ny Zanahary, fa tsy sahy nanakaiky azy ireo akory. Ary farany, nahita ny loharano’I Znahary izy fa tsy sahy nandrana na dia kely monja, na dia nangetaheta aza.
Rehefa el ny ela, tonga tao amin’ny tranon’I ZANAHARY HONO IZY, SAINGY NY VADINY IHANY NO TRATRANY TAO, DIA NOHARABAINY TSARA IZY, ARY REHEFA NOMENY RANO HOSOTROINA, DIA TSY SAHY NIKASIKA NY SINY IZY, FA NY VAVANY IHANY NO NOSOKAFANY NISOTROANY NY RANO;
Rehefa tonga I Zanahary avy eo nanotany azy, ny anton-diany sy izay nataony teny an-dalana ary ny nahatongavany tao an-trano, dia faly ary nanotany azy hoe:
- Inona no tadiavinao izany ry Faralahy?
- Tiako mba ho tsara tarehy aho ry Zanahary
Dia nokasihin’ny Zanahary fotsiny hono izy dia tonga faran’izay tsara tarehy sy tsara bika aok’izany. Dia faly izy ary nisaotra an’I Znahary dia lasa nody.
Rehefa tonga tao an-trano, akory nynhatairan’ny rahalahiny sy ny fialonany nahita ny hatsaran-tarehiny, dia nandinkadina azy.
- Fa ahoana no nahatonga anao toy izao? Tantarao anay. Dia nolazainy hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany.
- Dia mba tapa-kevitra ihnay koa hono izy enina mirahalahy, ha,deha ho any amin’ny Rafovato sy ho any amin’ny Zanahary, satria tsy nanaiky hono izy ireo fa I Faralahy ve no ho tsara tarehy noho izy ireo.
Rehefa tonga tao amin’I Rafovato dia nafarany tsara izy ireo mba tsy hikasika ny fary, tsy hikitika ny ondry, tsy haka amin’ny voasary, tsy hitoraka ny omby, tsy hisotro amin’ny loharano, hiarahaba tsar any vadin’ny zanahry, ary tsy hikasika ny zinga n any siny rehefa misotro rano. Dia nanaiky izy ireo dia lasa!
Saingy rehefa hitany hono ireo zavatra rehtra ireo, dia notsiriritin’izy ireo avokoa, notapahiny ny fary ka nihinanany, namonoany ny ondry fa noana izy, notangosany ny voasary fa tsy aritrany, notorahiny ny ombin’ny zanahary, ary rehefa nangetaheta fatratra izy, nosotroiny ny rano teo amin’ny loharano. Tsy niarahaba akory ny vadin’i Zanahary izy ary avy dia norombahiny teny amin’ny tanan’i vadin’ny zanahary ny siny dia nolaniany ny rano tao anatiny
Rehefa tonga Zanahary avy eo, nanotaniany ny anton-dian’izy ireo, dia nilaza fa mba te ho tsara tarehy tahaka an’I Faralahy;
Fa rehefa nanontanian izy ny diany teny an-dalana, nihinana ny farin’ny znahary, naomo ny ondriny, nananram-po tamin’ny vaosariny, nitoraka ny ombiny, nisotro ny loharanony, tsy niarahaba ny vadiny, ary nigoka n y rano tamin’ny siny, dia tezitra ny Zanahary ka nokasihiny fotsiny izy enina mirahalahy, dia nivadika biby daholo, ary lasa nitsoaka any anaty ala.
I Faralahy kosa, tonga nandova ny fananan’izy enina mirahalahy ary tonga mpanan-karena sady sambatra no niadana.
231 votes. Moyenne 2.96 sur 5.
1. rajoroarivony 03/04/2012
mahafinaritra tokoa ilay tantara kely sady mifono hanatra
2. Araf 27/12/2012
Tena tsara. Mampieritreritra ho an'ireo izay tsy mahay mankasitraka ny fanomezana.
3. ANDRY ZO 24/11/2018
Tsara be ilay anatra. Manohana ny mpanoratra hatrany ny tenako mba hamorona sombin-tantara ohatr'izao foana fa tsy tantara frantsay foana no entina hampianarina ny ankizy. Tsy ambakan'ireny mantsy ny tantara malagasy.
4. Fitiavana 06/11/2019
Tena tsara be ilay tantara sady mahatonga saina
Fa mba mitady tantara kely azon'ny ankizy kely lalaovina an-tsehatra ankoatra an'io raha mba manana ianareo, misaotra mialoha tompoko!
5. Fitiavana 06/11/2019